လေဆိပ်​မှာကျန် ​ခဲ့ တဲ့ နိုင်​ငံခြားသား ရဲ့ ပိုက်​ဆံအိတ် ​ကို ခက်​ခက် ​ခဲခဲ ပြန်​ယူ​ပေးခဲ့ တဲ့ မြန်​မာ့​လေယာဉ်​မှူးကြီး – Shwewiki.com
လေဆိပ်​မှာကျန် ​ခဲ့ တဲ့ နိုင်​ငံခြားသား ရဲ့ ပိုက်​ဆံအိတ် ​ကို ခက်​ခက် ​ခဲခဲ ပြန်​ယူ​ပေးခဲ့ တဲ့ မြန်​မာ့​လေယာဉ်​မှူးကြီး
ပီတိ ရေးသားသူ – လေယာဉ်မှူးကြီးအောင်ပို
မနေ့ညက ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ Chengdu ဖလိုက်မောင်းဖို့ ခရီးသည်တွေတင်တယ်။ လေယာဉ်တံခါးပိတ်အပြီး Boarding Bridge (ခရီးသည်တင်ပေါင်းကူးတံတား) လည်း ခွာပြီးရော ပြဿနာက စတော့တာပဲ…
ခရီးသည်တစ်ယောက်က လေဆိပ်ထဲမှာ သူ့ပိုက်ဆံအိတ် ကျန်ခဲ့တယ်လို့ လေယာဉ်မယ်ကတဆင့် သတင်းပို့လာတယ်။ အိတ်ထဲမှာ ငွေအတော်များများအပြင် သူသောက်နေကြ အရေးကြီးဆေးဝါးအချို့နဲ့ သူ့အမေအတွက် အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေပါကြောင်း ပြောလာတယ်…
ကျနော်လည်း လေယာဉ်ထွက်ခွာချိန် လိုသေးတာနဲ့ လေယာဉ်နားမှာရှိတဲ့ မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းများကတဆင့် လေဆိပ်လုံခြုံရေးကို အကြောင်းကြားပြီး စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တယ်… နှုတ်၏ဆောင်မခြင်းပေါ့…
သူတို့လေးတွေလည်း ကြိုးစားပေးကြရှာပါတယ်… နောက်ဆုံးတော့ လေဆိပ်ပင်မဝင်ပေါက် X-Ray စက်ဖြတ်ပြီးချိန်မှာ ကျန်ခဲ့ကြောင်း၊ စစ်ဆေးပြီး အန္တရာယ်ကင်းကြောင်း သိရပြီး လေဆိပ်လုံခြုံရေးတွေဆီကနေ ကျနော့်ရဲ့တာဝန်ခံမှုနဲ့ လေယာဉ်ဆီကို အပြေးအလွှား ယူလာကြတယ်…
လေယာဉ်နားရောက်တော့ လေယာဉ်မောင်းခန်း ပြတင်းပေါက်ကနေ နားကျပ်ကြိုးကိုချ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲတင်ရတာပေါ့…. စွန့်စားခန်းတစ်ခုပေါ့ဗျာ (Boarding Bridge ပြန်ကပ်ဖို့ဆိုတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မလွယ်တော့ဘူးလေ)
လေယာဉ်ပေါ်ရောက်တော့ ကာယကံရှင်နဲ့ သူ့စကားပြန်ကိုခေါ်ပြီး လေယာဉ်မယ်နဲ့ အတူတွေ့တယ်။ ဒီအချိန်အထိ သူတို့တွေမရိပ်မိကြသေးဘူး… ဒရမ်မာတွေ ခင်းပြီလေ…
အိတ်ကိုမပြသေးဘဲ “ကျန်ခဲ့တဲ့အိတ်ထဲမှာ ဘာပါလဲ” လို့ ခပ်တည်တည်မေးလိုက်တော့ ငိုတော့မယ့်မျက်နှာလေးတွေနဲ့ ပြောပြရှာတယ်… အသံတွေလည်းတုန်လို့…
ကျန်ခဲ့လို့ ပြန်ပို့ပေးရင်တောင် သောက်နေကြ အရေးကြီးဆေးတွေကို အချိန်မှီရဖို့ မလွယ်ကြောင်း၊ နယ်ပြန်သွားပြီး ပြန်လာယူဖို့ ခက်ခဲကြောင်း၊ အမေ့အတွက် လက်ဆောင်တွေကျန်ခဲ့တာ ဝမ်းနည်းကြောင်းပေါ့…
အဲဒီကျမှ ကျနော်လည်း “ရော့…. ဒီမှာအိတ်တလုံး စစ်ကြည့်”လို့ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ သူတို့မျက်နှာတွေဟာ ရုတ်တရက် ဝမ်းသာလွန်းလို့ဆိုတာလေ… အိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ဆေးတွေထုတ်ပြရှာတယ်…
ပြီးတော့ ပိုက်ဆံတွေထုတ်ပြီး ကျနော့်ကို အတင်းထိုးပေးတာ… ပွတာပဲပေါ့။ ကျနော်လက်ကာပြတော့ အားနာတယ်ထင်ပြီး လေယာဉ်မယ်ကို အတင်းပေးပြန်ရော…
ကျနော်လည်း ဘာမှပေးစရာမလိုကြောင်း၊ ခရီးသည်တွေအဆင်ပြေဖို့ လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းတွေဟာ အမြဲကြိုးစားနေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်သစ်ကြီးရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဟာ ပစ္စည်းကျန်ခဲ့ရင်တောင် စိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြန်ရှင်းပြခဲ့တယ်လေ…
တညလုံးလေယာဉ်မောင်းရတာမို့ ပင်ပန်းပင်မယ့် သူတို့ခရီးသည်လေးတွေရဲ့ အပျော်တွေကူးစက်လို့ ကျနော်တို့အတွက် ပီတိတွေဖြာဝေခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရ ညတစ်ည ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လို့…
ချစ်ခြင်းအားဖြင့် – အောင်ပို (၇-၁-၂၀၂၀)
ပီတိ ရေးသားသူ – လယောဉျမှူးကွီးအောငျပို
မနညေ့က ရနျကုနျလဆေိပျမှာ Chengdu ဖလိုကျမောငျးဖို့ ခရီးသညျတှတေငျတယျ။ လယောဉျတံခါးပိတျအပွီး Boarding Bridge (ခရီးသညျတငျပေါငျးကူးတံတား) လညျး ခှာပွီးရော ပွဿနာက စတော့တာပဲ…
ခရီးသညျတဈယောကျက လဆေိပျထဲမှာ သူ့ပိုကျဆံအိတျ ကနျြခဲ့တယျလို့ လယောဉျမယျကတဆငျ့ သတငျးပို့လာတယျ။ အိတျထဲမှာ ငှအေတျောမြားမြားအပွငျ သူသောကျနကွေ အရေးကွီးဆေးဝါးအခြို့နဲ့ သူ့အမအေတှကျ အမှတျတရလကျဆောငျတှပေါကွောငျး ပွောလာတယျ…
ကနြျောလညျး လယောဉျထှကျခှာခြိနျ လိုသေးတာနဲ့ လယောဉျနားမှာရှိတဲ့ မွပွေငျဝနျဆောငျမှုဝနျထမျးမြားကတဆငျ့ လဆေိပျလုံခွုံရေးကို အကွောငျးကွားပွီး စုံစမျးခိုငျးလိုကျတယျ… နှုတျ၏ဆောငျမခွငျးပေါ့…
သူတို့လေးတှလေညျး ကွိုးစားပေးကွရှာပါတယျ… နောကျဆုံးတော့ လဆေိပျပငျမဝငျပေါကျ X-Ray စကျဖွတျပွီးခြိနျမှာ ကနျြခဲ့ကွောငျး၊ စဈဆေးပွီး အန်တရာယျကငျးကွောငျး သိရပွီး လဆေိပျလုံခွုံရေးတှဆေီကနေ ကနြေျာ့ရဲ့တာဝနျခံမှုနဲ့ လယောဉျဆီကို အပွေးအလှား ယူလာကွတယျ…
လယောဉျနားရောကျတော့ လယောဉျမောငျးခနျး ပွတငျးပေါကျကနေ နားကပျြကွိုးကိုခြ ဖွညျးဖွညျးခငျြးဆှဲတငျရတာပေါ့…. စှနျ့စားခနျးတဈခုပေါ့ဗြာ (Boarding Bridge ပွနျကပျဖို့ဆိုတာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မလှယျတော့ဘူးလေ)
လယောဉျပျေါရောကျတော့ ကာယကံရှငျနဲ့ သူ့စကားပွနျကိုချေါပွီး လယောဉျမယျနဲ့ အတူတှတေ့ယျ။ ဒီအခြိနျအထိ သူတို့တှမေရိပျမိကွသေးဘူး… ဒရမျမာတှေ ခငျးပွီလေ…
အိတျကိုမပွသေးဘဲ “ကနျြခဲ့တဲ့အိတျထဲမှာ ဘာပါလဲ” လို့ ခပျတညျတညျမေးလိုကျတော့ ငိုတော့မယျ့မကျြနှာလေးတှနေဲ့ ပွောပွရှာတယျ… အသံတှလေညျးတုနျလို့…
ကနျြခဲ့လို့ ပွနျပို့ပေးရငျတောငျ သောကျနကွေ အရေးကွီးဆေးတှကေို အခြိနျမှီရဖို့ မလှယျကွောငျး၊ နယျပွနျသှားပွီး ပွနျလာယူဖို့ ခကျခဲကွောငျး၊ အမအေ့တှကျ လကျဆောငျတှကေနျြခဲ့တာ ဝမျးနညျးကွောငျးပေါ့…
အဲဒီကမြှ ကနြျောလညျး “ရော့…. ဒီမှာအိတျတလုံး စဈကွညျ့”လို့ ထုတျပေးလိုကျတယျ။ သူတို့မကျြနှာတှဟော ရုတျတရကျ ဝမျးသာလှနျးလို့ဆိုတာလေ… အိတျကိုဖှငျ့ပွီး ဆေးတှထေုတျပွရှာတယျ…
ပွီးတော့ ပိုကျဆံတှထေုတျပွီး ကနြေျာ့ကို အတငျးထိုးပေးတာ… ပှတာပဲပေါ့။ ကနြျောလကျကာပွတော့ အားနာတယျထငျပွီး လယောဉျမယျကို အတငျးပေးပွနျရော…
ကနြျောလညျး ဘာမှပေးစရာမလိုကွောငျး၊ ခရီးသညျတှအေဆငျပွဖေို့ လကွေောငျးလိုငျးဝနျထမျးတှဟော အမွဲကွိုးစားနမှောဖွဈကွောငျး၊ ရနျကုနျလဆေိပျသဈကွီးရဲ့ ဝနျဆောငျမှုဟာ ပစ်စညျးကနျြခဲ့ရငျတောငျ စိုးရိမျစရာမလိုကွောငျး ဂုဏျယူစှာနဲ့ ပွနျရှငျးပွခဲ့တယျလေ…
တညလုံးလယောဉျမောငျးရတာမို့ ပငျပနျးပငျမယျ့ သူတို့ခရီးသညျလေးတှရေဲ့ အပြျောတှကေူးစကျလို့ ကနြျောတို့အတှကျ ပီတိတှဖွောဝခေဲ့ရတဲ့ အမှတျတရ ညတဈည ဖွဈခဲ့ရပါတယျလို့…
ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ – အောငျပို (၇-၁-၂၀၂၀)